Part 1. Top 4 Android égwu jikwaa Music
MyTunes Music Player Little 2.3M Free 4 kpakpando
Google Play Music Dịgasị na ngwaọrụ $7.99 4star
Aga Media Manager, 1.6M Free 4.3 kpakpando
Audionet Music Manager Trial 3.2M Free 4.3 kpakpando
Part 2. Top 4 Android égwu ka Download maka ijikwa Music
1. Music MyTunes Player Little
MyTunes Music Player bụ a abụ olu ụtọ ọkpụkpọ na ngwa n'ihi na nzukọ gị music n'ọbá akwụkwọ na gị handheld ngwa. MyTunes bụ na mgbakwunye na a n'ụzọ zuru ezu ọtọ music ọkpụkpọ na chere maka normalizing olu etoju site Max uru Ama, artwork download, gbakwunyere mkpado edezi.
Download MyTunes Music Player Lite si Google Play >>
Na-agagharị na abụ olu ụtọ n'ọbá akwụkwọ site na ọkụ egwu, genre, song, album, ma ọ bụ playlist.
Na-agagharị na nchekwa usoro maka olu ụtọ na playlist faịlụ.
Exploration ọbá akwụkwọ site isi okwu.
Mee play anatara na-etinye onwe ha ka ha na Android ajụ n'ọbá akwụkwọ.
Play MP3, na ogg vorbis faịlụ.
Gụọ m3u gbakwunyere egwu ndepụta faịlụ.
Jikwaa song ọnụego na play adabere.
Mepụta n'ibu ma ọ bụ "smart" play anatara.
Exploration site iwu olu.
Akpaka artwork download.
Na-ehi ụra ngụ oge nzube na ije nchọpụta.
Chere maka Ice ude Sanwichi mkpọchi ihuenyo akara.
Na MyTunes ị pụrụ sọfụ gị music n'ọbá akwụkwọ site album, song, genre, ọgụ, ma ọ bụ play ndepụta na ngagharị ndị music n'ọbá akwụkwọ site isiokwu na olu iwu. I nwere ike na-ewu play anatara na-azọpụta ha ka Android media Ọbá akwụkwọ, nwekwara ike "smart" play anatara ka vigorously emepụta song anatara.
Nke a bụ onye na-adịghị na loading.
Google Play Music emepụta ka ọ dị mfe chọpụta, egwu na ịkekọrịta abụ olu ụtọ ị hụrụ n'anya na gam akporo nakwa dị ka web. Na anyị akwụkwọ All Access ọrụ, ị ike igwu ọtụtụ ijeri songs on Google Play, gee ntị na redio na-enweghị ókè, na-enwe play anatara handcrafted site anyị abụ olu ụtọ ọkachamara.
Download Google Play Music si Google Play >>
Na-ege ntị na-enweghị nsọtụ songs.
N'ịwa omenala redio ọ bụla na song, album, ma ọ bụ na-ese.
Enwe redio na-enweghị Skip ókè.
Get smart nkwanye isi na-amasị gị.
Nweta gị abụ olu ụtọ n'ebe ọ bụla na-enweghị syncing, na na-na gị họọrọ maka offline playback.
Ịzụta ọhụrụ abụ olu ụtọ na Google Play.
Ekekọrịta a free zuru ezu play nke songs ị ịzụta si Google Play na gị na-akpakọrịta na Google+.
Na ọnụ All Access na Standard, Google Play Music ngwa na-ahapụ ị na-ege gị abụ olu ụtọ collection n'ebe ọ bụla. Gị niile abụ olu ụtọ na-echekwara online, si otú ọ dịghị mkpa ka nchegbu banyere syncing, ịchekwa ohere tupu offline playback.
Ụda nkarị a gaghị na-emechi ruo ịbụ HD. Ha n'ezie pụrụ ime mma na ụda àgwà. Ala nke sterịn bụ ihe ọzọ na mpaghara na kwesịrị mara.
3. aga Media Manager
Aga Media Manager bụ a họrọ nkwụnye na nke aga obubata Ọpụ. Aga Media Manager ike ka ị na ego music, foto, na atụmatụ na ngwa drawer mma. Ị nwere ike idozi, ihichapu, zobe, ma kpọọ media.
Download aga Media Manager si Google Play >>
1. Common ọrụ:
Nkwado zoo, ụdị, ma na-eso foto, music ma ọ bụ vidiyo.
Otutu nhọrọ dị.
2. Foto dị Manager:
integral a-aga Foto dị Nchọgharị
nkwado dabeere, ego Ama, setịpụrụ dị ka akwụkwọ ahụaja ma ọ bụ ọzọ kọntaktị foto
integral a-aga Music Player
mgbe play abụ olu ụtọ, ngosi mmanya show abụ olu ụtọ ọkpụkpọ wijetị na
nwere ike ịgbanwee na-egwu ma ọ bụ kwụsịtụ music.
akwado nkịtị ọrụ
5. Foto album wijetị:
Aga Media Manager ga ibuga gị a mma omume nke nzukọ media.
Aga Media Manager ga na-ewetara gị a ukwuu ihe ọmụma nke na-elekọta media.
Ọ lags na akwụkwọ mpịakọta, anatara ... na site n'oge ruo n'oge na-akwụsị na-akpọ music .... nwere ga-abụ nsonaazụ ụda ebe ụda àgwà bụ omenala & ọ ga-ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbanwetụrụ.
The Audionet Music Manager Trial bụ ule mbipụta nke Audionet Music Manager. The Audionet Music Manager bụ a elu-ọgwụgwụ akara ngwa n'ihi na niile UPnP-nkesa isi music usoro na na mma arụmọrụ maka Audionet netwọk usoro.
The Audionet Music Manager na-enye a pụrụ iche dịgasị iche iche nke ọrụ maka mfe omume na ike nkasi obi. Nke a na-kere Audionet maka ndị nile hụrụ ezigbo music ụtọ.
Download Audionet Music Manager si Google Play >>
Search: site mgbata na ụdị.
Bookmaking: site mgbata na ụdị.
Olu akara: na-esi ọnwụ, akara site n'usoro n'usoro aka na tuo.
Multi sụgharịrị na ihe nkesa rụzuru: ijikwa niile UPnP playback ngwaọrụ (sụgharịrị) na sava, site n'aka nke ike menu nhọrọ.
The Audionet Music Manager bụ Audionet ọhụrụ nkecha software mkpebi niile smart igwe na pad na Android operating atụmatụ. Ọ nachi karịsịa niile Audionet netwọk usoro na ejisie music nhọrọ na playback.
Ụfọdụ ọghọm bụ pụta ụwa ka mfe nke usoro ihe omume. Unu ghara inwe ike nza nke mgbanwe.
Part 3. Top 3 Android Software ka Download maka Jikwaa Music
Wondershare MobileGo for Android 4.3M $48.00 Mac OS 10,8, 10.7 na 10.6
doubleTwist Dịgasị na ngwaọrụ $4.99 Windows, Mac OSX
MediaMonkey 2.9M $14.99 Windows All, Windows XP, Windows Vista.
Wondershare MobileGo for Android Njikọ gị Android ekwentị na kọmputa na iji eriri USB maka ibu-mfe nbudata, na-ebugote, backups, ngwa ijikwa, na ndị ọzọ. Ọ bụ a abụọ-akụkụ atụmatụ, na a free Android ngwa gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na desktọọpụ software na kọmputa gị.
Kwado nyefee iTunes music ka Android ekwentị, na Anglịkan
Import music site na kọmputa na-Android ekwentị, na mbupụ music si gam akporo ekwentị na kọmputa
Tọghata music ka Android enyi na enyi usoro - MP3
Download music gị Android ekwentị site na online media center
Hichapụ achọghị music na batched onwe elu ohere
Ọ bụ ihe niile-na-otu Android njikwa, nwere ike ijikwa kọntaktị, ngwa, video, photos, ozi, SD kaadị, nakwa dị ka music.
Ọ Akwadoo elu music na ndị ọzọ na android ekwentị ma weghachi na 1 Pịa.
Ọ bụ dakọtara na nza nke gam akporo igwe, dị ka Samsung, HTC, Google, Sony, Motorola, Huawei, na ndị ọzọ.
The Super Toolkit ọrụ na-adịghị free. Ngwaọrụ ọzọ ijikwa ọrụ bụ free.
doubleTwist na-ike gị ka mmekọrịta music si iTunes gị Android ekwentị WiFi ma ọ bụ na a eriri USB. E wezụga music, video na foto nwekwara ike synced kwa.
Mmekọrịta music, video na foto gị Android ekwentị mfe.
Ọ ga-eji na kọmputa gị na Android ekwentị.
Ọ nwere nnọọ mfe interface.
Otú ọ dị, ọ pụrụ ime ihe ọ bụla jikwaa kọntaktị, SMS na ngwa ọdịnala na ekwentị mkpanaaka gị, ka naanị na nkwado ma weghachite ekwentị mkpanaaka gị.
MediaMonkey bụ oké software jikwaa music na video site na kọmputa. Na ya, ị nwere ike dee CD, download music, fim, Podcast, ịmepụta listi ọkpụkpọ, na-egwu music, na ndị ọzọ.
Mepụta playlist na-etinye gị chọrọ songs na ya.
Jikwaa nkume, oge gboo, audiobook, pọdkastị, n'ụlọ fim, TV na ndị ọzọ Genres.
Play MP3 na ndị ọzọ na ọdịyo faịlụ were were.
Download music, pọdkastị ma na fim, nakwa dị ka rip CD.
Tọghata WMV, OGG, WMA, FLAC na ndị ọzọ na-dakọtara formats.
A ike media njikwa ngwá ọrụ na-ahazi music na video mfe na conveniently.
Ọ na-jikwaa media, apụghị jikwaa kọntaktị, ozi, ngwa ọdịnala, wdg
Method 4. Ugwu Android dị ka ihe mpụga ike mbanye jikwaa Music Iji aka
Dị ka ị maara, Android nwere onye na-emeghe ọdịdị, nke na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ị na jikwaa music si Windows kọmputa aka enweghị ihe ọ bụla ngwá ọrụ. Ebe a, ndị na-esonụ, Aga m egosi gị otú jikwaa music na android ekwentị nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android ekwentị gaa na Windows kọmputa site na eriri USB. Nzọụkwụ 2. Pịa "Open nchekwa ele Files" nhọrọ mgbe AutoPlay dialog igbe na-egosi na kọmputa gị. Ọ bụrụ na nke a bụ mgbe mbụ ị jikọọ gị Android ekwentị, na PC na-aga site a obere usoro nke na nbudata na wụnye ọkwọ ụgbọala maka gị Android ekwentị. Nzọụkwụ 3. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, gị Android ekwentị ga-ndokwasa dị ka a mbughari ike mbanye. Chọta ya na kọmputa gị na-emeghe ya. Nzọụkwụ 4. All faịlụ na nchekwa na SD kaadị gị Android ekwentị na-egosipụta. Gaa ahụ music na nchekwa ma imeghe ya. Kwụpụ 5. Mgbe ahụ, ị pụrụ iṅomi gị chọrọ music na mado na kọmputa, ihichapụ achọghị music, na mbubata songs site na kọmputa gị Android ekwentị.
Best 6 Mac Ime égwu Easily akara gị Mac si gam akporo
2 Ụzọ Nyefee ịzụrụ si iPhone ka Computer
6 Ihe Ndị Ị Maara Banyere Samsung Kies 3
Eduzi ka enyo Your Android ka Android
Olee otú Jiri Samsung Kies nyefee Files
Flash Player maka Samsung Galaxy
Kpọmkwem Download Android égwu na ekwentị gị
> Resource> Android> Top 7 Android Music Managers